झापा कमलका एक बृद्धको कोरोनाबाट निधन – MechiTimesOnline
झापा कमलका एक बृद्धको कोरोनाबाट निधन
in कोरोना भाइरस, स्थानीय तह
झापा । झापाको कमल गाउँपालिकामा पहिलो पटक कोरोनाका कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ । केरखा बजारमा ८३ बर्षिय बृद्धलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । उहाँको उपचारका क्रममा आज बिहान ४ बजे धरानस्थित बीपी कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । कमलगाउँपालिकामा पहिलो पटक कोरोनाका कारण निधन भएको पाथीभरा समाचार संग कुरा गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लले पनि पुष्टि गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचाररत सिरहाका ५५ वर्षीय पुरुषको हिजो साँझ मृत्यु भएको छ । प्रतिष्ठानका प्रवक्ता प्रा. डा. निदेश सापकोटाका अनुसार अत्यधिक खोकी, ज्वरो र स्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि भदौ ६ गते सिरहा नगरगरपालिका १ बस्ने ती पुरुष उपचारका लागि प्रतिष्ठान आएका थिए ।
उनलाई सुरुमा मेडिसिन वार्डमा भर्ना गरिएको थियो भने भदौ ७ गते पीसीआर जाँचको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि कोभिड आस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । कोभिड अस्पतालको आईसीयुमा अक्सिजन दिएर उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । मृतकले १८ महिनादेखि उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गर्दै आएको र २० वर्षअघि क्षयरोग भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
एकैदिनमा एकहजार १११ संक्रमित, ८ को मृत्यु
भद्रपुर अस्पतालको व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या — सांसद लिङ्देन